सद्‌गुरु: रावण शिवका महान् तथा उग्र भक्त थिए । उनीहरूका बारेमा थुप्रै कथाहरू उल्लेखित छन् । एउटा भक्त महान् बन्नु हुँदैन, तर रावण महान् भक्त थिए ! उनी दक्षिणबाट हिँडेरै कैलाशसम्म पुगे— कृपया तपाईं यो कल्पना गर्नुहोस्, उनले हिँडेरै त्यत्रो दुरी पूरा गरे । शिवको महिमा गाउँदै रावणले पूरै यात्रा तय गरे । आफूसँग भएको डमरु बजाउँदै, कुनै तयारीबिनै उनले तत्कालै १००८ श्लोकहरू रचना गरे, जसलाई शिव ताण्डव स्तोत्रम भनिन्छ ।
कैलाशको शिखरमा दुईजनाको लागि मात्र स्थान थियो ! त्यसैले, पार्वतीले शिवलाई सङ्गीतको नशाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिन् । उनले भनिन्, “लौ न ! रावण त माथि नै आइपुगिसक्यो।" तर, शिव भने रावणको भजन र सङ्गीतमा चुर्लुम्मै डुबेका थिए । अन्ततः पार्वतीले उनलाई भजनको सम्मोहनबाट बाहिर सामान्य अवस्थामा फर्काइन् । अनि, रावण शिखरमै पुग्न लाग्दा शिवले उनलाई लात्ताले धक्का दिए । कैलाशको दक्षिणपट्टीको भागबाट रावण घिस्रिँदै तल पुगे । यस्तो भनिन्छ कि रावण डमरु लिएरै तल गुल्टिएको हुँदा पूरै पर्वतभरि त्यसको छाप बनेको हो । यदि तपाईंले कैलाशको दक्षिणी भागलाई हेर्नुभयो भने, तपाईं त्यसको बिचमा चिरिएको जस्तो दाग देख्नुहुनेछ, जुन सिधै तलसम्म गइरहेको छ ।
आफ्ना पिताले शिवको अपमान गरेपछि कसरी सतीले आफैँलाई यज्ञ–अग्नीमा जलाइन्, अनि विरक्त भएका शिवले कसरी सतीको कुहिँदै गरेको शरीर बोकेर हिँडिरहे भन्ने कथा स…
फेब्रुअरी 21, 2020